काठमाडौं, १ चैत्र । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई मुख्य पाँच धारमा विभाजित गरेको छ । फागुन ९ देखि १२ सम्म चलेको उक्त पार्टीको संघीय परिषदको चौथो बिस्तारित बैठकममा प्रस्तुत ‘नयाँ शक्तिको दुई वर्षः वैकलिप्क राजनीतिको अपरिहार्यता’ शीर्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो वर्गीकरण गरिएको छ ।
नयाँ शक्तिले उदारवादी धारमा नेपाली कांग्रेसलाई राखेको छ भने एमाले र माओवादीलाई तथाकथित कम्युनिष्ट शक्ति भन्दै कम्युनिष्ट धारमा राखेको छ । राप्रपाका विभिन्न समूहलाई सामन्ती रुढीवादी धारमा राखेको कांग्रेसले मधेसकेन्द्रित दल र जातिय पहिचानका पक्षधार पार्टीहरुलाई पहिचानवादी धारमा राखेको छ । पाँचौ धारको रुपमा वैकल्पिक राजनीतिको धारलाई राखेको नयाँ शक्तिले यही समूहमा पर्ने विवेकशीला साझा पार्टीको चिरफार गरेको छ ।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै विवेकशील साझाबारे संयोजक भट्टराईले व्यक्त गरेको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘शहरीया निम्न मध्यम वर्गीय युवा समूह, जसले राजनीतिलाई त्यति गहिराईमा बुझ्दैन, तर यथास्थितिवाद असन्तुष्ट छ, त्यसको एउटा ठूला तप्का विवेकशील साझाको पछाडि कुदिरहेको छ । त्यसैले अहिले हामीले त्यसलाई पनि राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्वीकार्नुपर्छ ।’
उनले विवेकशील साझाका नेतृत्व गरिरहेका मिश्रलाई संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘उनले विगतका क्रान्ति परिवर्तनलाई स्वीकार्दैनन् । उनले राजतन्त्र, दरबारलगायत इतिहासको खुब महिमा गाउँछन् । तर, कांग्रेस र कम्युनिष्ट लगायत सबै क्रान्ति गर्ने शक्तिहरु खराब भन्ने कुरा उनको जिनमा नै छ ।’
उनले अगाडि भनेका थिए, ‘नयाँ युवा पंक्तिलाई हिजोका क्रान्ति परिवर्तन र त्यसको नेतृत्व गर्ने शक्ति खत्तम हुन्, विदेशीका दलाल भनिदिने र प्रकारान्तरले घुमाएर राजतन्त्र चाहिँ ठिक थियो भन्ने खालको उनको बुझाई आउँछ । त्यो बेठीक छ । इतिहासको मूल्यांकन गर्ने, विगतका क्रान्तिहरुलाई सम्मान गर्ने र त्यसैमा टेकेर हामी अगाडि जाने हो । यसबारे विवेकशील साझा र नयाँ शक्तिबीच असमानता छ ।’
विवेकशील साझाको चिरफार गर्दै भट्टराईले भनेका थिए, ‘उनीहरु अतिशुद्धतवादी कुरा गर्छन् । विकासका कुरा, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको कुरा त गर्छन् । तर, कसरी ल्याउने ? संरचना र समस्या कहाँ हो ? त्यसलाई कसरी हल गर्ने ? त्यसको वैचारिक, राजनीतिक र दार्शनिक हलहरु के हुनसक्छन् ? भन्ने कुरामा उनीहरु जाँदैनन् । विशुद्ध आदर्शवादी ढंगले सुशासनको कुरा गर्छन् । झट्ट सुन्दा राजनीतिक चेतना नभएका मानिसहरुलाई केही समय त आकर्षित गरे पनि त्यो दिगो हुँदैन ।’
‘उहाँहरु उत्तर वैचारिक युगको कुरा गर्नुहुन्छ । विचारको अन्त्य भयो भन्नुहुन्छ । व्यवहार राम्रो भए भइगयो, विचार जेसुकै भए पनि हुन्छ । गाडी नै बेठिक छ भने ड्राइभर मात्रै राम्रो भएर के काम,’ भट्टराईको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘हामी गाडी पनि राम्रो ड्राइभर पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्छौं । उहाँहरु गाडी थोत्रो भए पनि हुन्छ, ड्राइभर राम्रो भए गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्नुहुन्छ । यो अवैज्ञानिक र अवस्तुवादी सोच हो ।’
वैकल्पिक राजनीतिको धार
विद्यमान राजनैतिक शक्तिहरु र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने विचार र प्रवृत्तिको विकल्पको रुपमा उदाएका शक्तिलाई वैकल्पिक राजनीतिक धार भन्न सकिन्छ । यस धारभित्र अहिले मुख्य दुई वटा दल देखिएका छन् । एउटा – हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल । अर्को – विवेकशील साझा पार्टी । विवेकशील साझा पार्टी राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल भइसकेको हुँदा यसलाई एउटा राजनीतिक प्रवृत्तिकै रुपमा चित्रण गर्नु, त्यसका सकारात्मक र कमजोर पक्षका राजनीतिक विश्लेषण र संश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
एक – विवेकशील साझाले विकास, सुशासन र समृद्धिको एजेण्डा उठाएको छ । खासगरी भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको सवालमा हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ । इमान्दार, पारदर्शी र नैतिक राजनीतिप्रतिको प्रतिवद्धता स्वागतयोग्य मान्नु पर्दछ । दुई – निर्वाचन घोषणापत्रमा विवेकशील साझाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको पैरवी गरेको छ । यो सहकार्यको अर्को विषय हुनसक्छ ।
तर नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र विवेकशील साझाका बीचमा थुप्रै भिन्नताहरु छन् ।
पहिलो – नयाँ शक्ति पार्टी देशमा लोकतान्त्रीकरणको युग पूरा गरी समृद्धीकरणको चरणमा राजनीतिक विकल्पको निर्माण गर्न चाहिरहेको छ । उनीहरु लोकतान्त्रीकरणको युगका हरेक घटना, पात्र, प्रवृत्तिलाई नकारात्मक चित्रण मात्र गर्दछन् । त्यो समाज विकास क्रमलाई नबुझ्ने दृष्टिदोष र इतिहासप्रतिको अपमान हो । शहीदहरुको अपमान हो । लोकतन्त्रकालागि भएका महानतम् संघर्ष र योगदानहरुको अपमान हो । संघर्षशील र क्रान्तिकारी परम्परालाई अपमान गरेर थप क्रान्ति गर्न सकिँदैन । सबै चिज लोकतान्त्रीकरणको युगका पार्टी र नेताहरुले बिगारेको हो भने के राजतन्त्र, पञ्चायत र राणाशाही ठीक थियो त ? विगत सबै राम्रो थियो, वर्तमान मात्र बिग्रिएको जस्तो भान आउने उनीहरुको पैरवी हुन्छ । त्यो सही होइन । विगत पनि राम्रो थिएन, वर्तमान पुग्दो भएन, तसर्थ भविष्य निर्माणमा लागौं भन्ने नयाँ शक्तिको भनाइ हो ।
दोस्रो – विवेकशील साझामा ‘अतिशुद्धतावाद’को रोग देखिन्छ । नेपालजस्तो पिछडिएको चेतना र क्रिटिकल मासको अभाव भएको देशमा अतिशुद्धतावादले पूर्वाग्रह मात्र सिर्जना गर्दछ । समाजमा व्यक्तिका भूमिका खास ऐतिहासिक परिस्थितिले निर्धारण गरेका हुन्छन् । नयाँ राजनीतिक आन्दोलन संगठित गर्दा पुराना पूर्वाग्रह मात्र राखेर हुँदैन । समाजको वस्तुगत धरातलमा उभिएर त्यसलाई आदर्शौन्मुख रुपान्तरण गर्नु नै क्रान्ति र परिवर्तन हो ।
तेस्रो – नयाँ शक्ति पार्टी विचारधाराको पुुनर्निर्माण, विचारधाराको पुनर्भाष्यको अभियानमा छ । मान्छे विचारशील प्राणी हो । राजनीतिमा विचारधाराको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । देश र काल अनुसार विचारको निर्माण, पुनर्निर्माण र विनिर्माण गरिरहनु पर्दछ । तर विवेकशील साझाले ‘उत्तर वैचारिक युग’को कुरा गर्दछ । सबै वाद र विचारधाराको युग सकियो भन्नु वैज्ञानिक, तथ्यपरक र सही हैन । स्पष्ट विचार र दर्शन विनाको राजनीति दिशावोध यन्त्र (कम्पास) विनाको जहाजको यात्रा जस्तो हो ।
चौथो– नेपाल जस्तो वहुजातीय मुलुकमा उत्पीडित जाति, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समेट्ने, संविधान संशोेधन गर्ने र इन्द्रेणी राष्ट्रियताको अवधारणा लागू गर्ने धारणा विवेकशील साझाले अस्वीकार गर्दछ । उनीहरु निरपेक्ष योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) को कुरा गर्दछन् । हामी समावेशितासहितको योग्यतातन्त्रको कुरा गर्दैछौं । यस सवालमा उनीहरुको धारणा करिव एमालेकै जस्तो छ । यो कुरा नयाँ शक्ति पार्टी स्वीकार गर्न सक्दैन ।
पाँचौं – यदि यी गम्भीर कमजोरी र दृष्टिकोण नहटाउने हो भने विवेकशील साझाले दक्षिणपन्थी बाटो समाउने सम्भावना हुन्छ । विकास, सुशासन र समृद्धि भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको वैचारिक अभिमुखीकरण के हो ? शब्दमा त पुराना दलहरुले पनि यो कुरा गरेकै छन् त ? किन सम्भव भइरहेको छैन ? समृद्धिका बाधक तत्वहरु के हुन् ? त्यसलाई कसरी हटाउने हो ? विवेकशील साझा खासखास क्षेत्रमा समाजवादी नीतिहरु लागू गरेर जान तयार छ कि सतही रुपमा विकृतिहरुको विरोध मात्र हो ? संरचनात्मक सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता के हो ? यहाँनेर पनि हामीले तीखो वैचारिक संघर्ष चलाउन जरुरी छ । वैकल्पिक राजनीति भनेर मात्र हुँदैन । कस्तो विकल्प ? प्रगतिशील र अग्रगामी विकल्प कि दक्षिणपन्थी र पश्चगामी धारबाट विकल्प ? यी विषय अहिले पर्खिएर हेर्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।
पढ्नुहोस् नयाँ शक्तिको पूर्ण दस्तावेज-
नयाँ शक्तिको कार्यालयमा बुद्ध र मार्क्ससहित अब यी पाँच तस्बिरहरु, शौचालयमा संकल्प !